Nyama yenyama yehuku mu karoti uye leek muto | Kicheni Mapepa
Nyama nyama dzekudya mune karoti uye leek muto
Maria vazquez | 11/04/2021 10:00 | Nyama Recipes
Meatballs haisi chikamu chenguva dzose yemenyu yangu yevhiki uye zvakadaro ndinonyatsonakidzwa nazvo. Nyama dzekudyara mugadheni hapana mubvunzo ndidzo dzandinoda asi hazvishamise kuti kuti ndikwane mupantry yangu ndinobika dzimwe shanduro senge iyi Nyama nyama dzekudya mune karoti uye leek muto.
Huku ndeimwe nzira yakanakisa kune yemombe. Iko kunhuhwirira kwayo kwakapfava kupfuura kwekupedzisira, asi kwakasanganiswa nemuto wemuriwo ivo vanova kwete chete a dhishi rinonaka kwazvo, asiwo hutano. Kusada kuzviedza?
Unogona kupedzisa menyu inosanganisira mukombe wemupunga wakabikwa mumuto kana kushumawo muchero wakanaka nemuriwo saladhi. Aya mabhora enyama anogona zvakare kuve echando, saka hazvitomborwadzise kugadzira mashoma mashoma kuti adye zvakanaka pamazuva iwayo iwe paunonzwa sekunge hausi kubika.
Nyama yenyama yemabhuru mueek uye karoti muto inzira inonaka uye ine hutano kupedzisa menyu. Shumira nemupunga kana saladhi.
Recipe mhando: Makwara
Kubika nguva: 35 M
400 g. minced nyama yehuku
½ hanyanisi, akachekwa zvikuru
Munyu uye pepper
Chidimbu chechingwa mafufu akanyoroveswa mumukaka uye wakadururwa (sarudzo)
1 teaspoon yeparsley yakakoswa
Mamwe maorivhi emhandara emafuta ekutsvaira
2 mashupuni emamwe maorivhi emhandara emafuta
1 hanyanisi hanyanisi, minced
1 bhero bhero pepper, minced
3 maekisi, minced
2 karoti, akachekwa
2 tablespoons tomato muto
½ teaspoon yema paprika
1-2 makapu yemuriwo muto kana mvura
Isu tinogadzirira muto. Kuti uite izvi, pisa mafupuni maviri emafuta mupani uye fry hanyanisi yakatemwa, mhiripiri, leek uye karoti imomo kwemaminitsi gumi nemaviri.
Zvino, mwaka nemunyu uye mhiripiri, wedzera madomasi akagochwa uye paprika wosanganisa.
Pekupedzisira, tinodurura kapu yemuriwo muto kana mvura, tichivhara uye tobika kwemaminitsi gumi nemashanu tobva tasanganisa. Kana muto wakakora zvakanyanya, unongofanira kuwedzera imwe mvura kana muto.
Ipo muto urikubika, tinogadzirira nyama dzekubika nekusanganisa zvese zvinoshandiswa kunze kweupfu nemafuta emuorivhi.
Kamwe kanyatso kusanganiswa, tinotora zvidimbu zvidiki zvehupfu tozvimisikidza mubhora renyama.
Tevere, isu tinopfuudza nyama yenyama muupfu uye tinodziisa mumabatch mumafuta anopisa kudzamara zvasviba.
Sezvo ivo pavanotsvukira, tinovaisa mumuto iyo parizvino ichapwanywa. Mune muto unopisa uko kubika maminetsi matatu achapedza.
Isu tinoshumira nyama yehuku yehuku mune inodziya karoti uye leek muto.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Nyama Recipes » Nyama nyama dzekudya mune karoti uye leek muto
Sipinachi, Strawberry uye Fig Salad neUchi Vinaigrette